ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း Archives - Page 30 of 185 - Myanmar Fire Services Department
A man died due to electric shock at Chindwinyeikmon Housing, Mingalar Road, No (92) Yard, Dagonseikkan Township, Yangon Region
editor | Aug 29, 2020 | News, ထူးခြားဖြစ်စဉ်, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
28.8.2020 at about 09:30, an electric shock occurred by the owner U Sae Aung Than (100’×80′) house at Chindwinyeikmon Housing, Mingalar Road, No (92) Yard, Dagonseikkan Township, Yangon Region. The electric shock occurred while U Kaung Phyu who was cutting...
Car accident near the mile post (153/5), Naypyitaw-Yangon Highway Road, Oaktwin Township, Bago Region
28.7.2020 at about 02:30 – the white (Hyundai Mighty Truck) that running from Yangon to Naypyitaw driven by U Thurawadi Aung crashed the hot pink (Yutong) Shwemanthu Express Bus that pausing due to the Engine failure near the mile post (153/5), Naypyitaw-Yangon...
Tree fallen at the outside of Thidar Market, Nalmyay (4), No (7) Quarter, Myinchan Town, Mandalay Region
editor | Aug 28, 2020 | News, ထူးခြားဖြစ်စဉ်, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
27.8.2020 at about 05:15 – A Htanaung Tree (3 feet in girth and 20 feet tall) fell down at the outside of Ayemyahidar Market, Nalmyay (4), No (7) Quarter, Myinchan Town, Mandalay Region. According to the report, at about 05:18- 15 Fire Services Personnel and 9...
Ayarwady River swelling at Kathtiya Quarter, Htonebo Village Tract, Padaung Township, Pyay District, Bago Region
editor | Aug 27, 2020 | News, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
26.8.2020 at 07:30- river swelling occurred at Kathtiya Quarter, Htonebo Village Tract, Padaung Township, Pyay District, Bago Region. According to the report,5Fire Services Personnel from Htonebo Local Fire Station evacuated 11 households to the Myatheintan Pagoda...
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပခုက္ကူခရိုင်၊ ရေစကြိုမြို့နယ်၊ တာဘောင်ရှိ ရေတံခါးမှ ရေယိုစိမ့်မှုသတင်း
editor | Aug 27, 2020 | News, ထူးခြားဖြစ်စဉ်, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
၂၆.၈.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၀၈၀၀ အချိန်ခန့်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပခုက္ကူခရိုင်၊ ရေစကြိုမြို့နယ်၊ အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်နှင့် ကျော်မကြားကျေးရွာတို့အား ဆက်သွယ်ထားသည့် တာဘောင်လမ်းရှိ ရေတံခါး မှာ ပိတ်ထားသော်လည်း ရေများစိမ့်ထွက်နေသောကြောင့် ရေတံခါးအောက်ဘက်ရှိ စပါးစိုက်ခင်းများနှင့်...
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဇီးကုန်းမြို့နယ်၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်-ပြည်ကားလမ်းတွင် သစ်ပင်လဲကျမှုသတင်း
editor | Aug 26, 2020 | News, ထူးခြားဖြစ်စဉ်, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
၂၅.၈.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၁၄ ၅၇ အချိန်ခန့်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဇီးကုန်းမြို့နယ်၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်-ပြည်ကားလမ်း၊ မြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံရှေ့တွင် လုံးပတ်(၃)ပေ၊ အရှည်(၄၀)ပေခန့်ရှိ ယင်းမာပင်သည် အမြစ်ပွပြီး ကားလမ်းမပေါ်သို့ လဲကျကျကာ လမ်းဘေးတွင် ရပ်ထားသော Bongo...
Page 30 of 185« « Previous...1020...2829303132...405060...Next »